Imisebenzi Yesikhungo Sezocingo e-Dubai 🥇 【Ukuqashwa & Isiqondiso E-UAE】
Imisebenzi yesikhungo sekholi e-Dubai
Kungani sikhokhisa i-CV yokulayisha ku-Dubai?
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at April 28, 2019
Ungathola kanjani imisebenzi yesikhungo sekholi e-Dubai?
Imisebenzi yesikhungo sezingcingo ngaphakathi Dubai the I-United Arab Emirates ingesinye seziqashi esikhulu kunazo zonke. Ungakutholela okuhle kakhulu ngenkathi usebenza ezinhlanganweni ezifana nezinkampani zezikhungo zocingo. Kunjalo lolu hlobo lomsebenzi akulula ukuphatha futhi ngokweqiniso, kuthatha imizamo eminingi evela kubasebenzi babo. Kepha empeleni, lolu hlobo lomsebenzi alungenziwa eDubai noma e-Abu Dhabi kuphela olungenakusho lutho indawo emhlabeni.
Inhlangano yethu ibhala le ndatshana ukukukhombisa nje indlela yokuthola lolu hlobo lomsebenzi. Ngokuvamile sikhuluma ngokubeka konke okuhle njengento ebalulekile umhlahlandlela wezisebenzi zasePoland nabantu abahlala e-United Arab Arab Emirates.
Imisebenzi Yesikhungo Sekholi e-Dubai?
Ngezansi uzothola ngokuphelele amafemu esikhungo sezingcingo lapho ungafaka isicelo futhi uthole umsebenzi. Kwezinye izimo yebo, kunjalo, kuzoba nzima ukulayisha i-CV yakho kepha bayokubeka inketho yokuxhumana nabo. Ngakho-ke uzobe uhola indlela enhle kakhulu yokubuya ngokushesha okukhulu kunendlela ejwayelekile. Imisebenzi yesikhungo sezingcingo eDubai ingama-100% okufanele aye kuyo UAE.
Izinsizakalo ukuthi izinkampani zesikhungo sezingcingo zinikeza e Dubai
Iningi lezinkampani ezisebenza ngezingcingo izinhlangano ezisebenzela emuva ehhovisi. Futhi ngaphezu kwe-80% yabo kuyasebenza njengezinkampani ezithuthukile zokusebenzisana kwamakhasimende.
Kulezi zinsuku amafemu amaningi abe ngamazwe futhi yadlula ngezici ezifana nokuhlanganiswa okuningana kwe-computer-telephony. Futhi ukumaketha kwabezindaba kwezenhlalo kanye Izinkampani ezihlobene nokukhangiswa
Lokhu kuvumela amafemu ukuthi amukele imininingwane yamakhasimende kusistimu yokuphatha ubudlelwane namakhasimende abo. Ikakhulu uma sikhuluma ngezinkampani zase-United Arab Emirates. Bangothando ukuthuthukisa iphrojekthi ngokuya ngezinhlaka kanye nokwethula amaphrojekthi eDubai. Futhi izinkampani ezisebenzisana nazo zifuna ukufeza lokho kungakapheli isikhathi esifushane.
Ngakolunye uhlangothi, imisebenzi yesikhungo sokushayela inikwe amandla indawo yokuxhumana yamakhasimende ngamazinga aphezulu kakhulu. Izinkampani ezinjengamakhasimende abiza amakhasimende asebandayo manje asekwazi ukuletha izisombululo eziningi kumakhasimende abo. Yakhelwe kakhulu ukuhlangabezana Izidingo zezinhlangano ze-Abu Dhabi noma zeDubai zamabhizinisi wanamuhla.
Amafemu okubiza amaCold and Call Centre afaka phakathi imisebenzi elandelayo:
Imisebenzi ku-Inbound helpdesk izixazululo zamakhasimende aphesheya.
Ukusebenza njenge-agent futhi uphendula izinsizakalo zefoni ne-imeyili.
Ukuhlinzeka ngemisebenzi yakho njengemfihlo yamakhasimende ezitolo zokuthenga.
Uku-oda kuthatha indawo ngocingo ngokuxhumana.
Okubaluleke kakhulu e-Dubai nase-Abu Dhabi njengomsizi wokuhola isizukulwane esiphambili kanye nomsizi we-telesales ophumayo.
Sebenza njenge ongumsunguli wobuchwepheshe wobungaphakathi nobangaphandle.
I-database ehlobene kakhulu kanye nochwepheshe wezokuthuthukiswa kwe-IT.
Ngezixazululo zethu eziphelele zokusebenzisana kwamakhasimende, amabhizinisi angalinganisa ukusebenza kwezinqubo zawo, hlinzeka ngosizo lwamakhasimende, wenze umsebenzi wokufinyelela, futhi uqoqe idatha yokuthuthuka kokusebenza, ngaphandle kokunikezela izinsiza ezihlanganisiwe.
Ikhamphani ye-TeleServices.ae e-Dubai
Inkampani yokuqala esisekupheleni kwayo iseDallas Services Company eDubai. Le nhlangano enye edume kakhulu futhi yaziwa kakhulu ngabantu abangama-Arabhu eDubai City.
Ngenkathi ngisebenza nezinkampani eDubai. Usayizi obalulekile uzokusiza ukuthi ukhuliswe ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke, sikukhuthaza ngamandla ukuthi ulayishe kabusha amandla akho kule nkampani. Futhi ubanikeze ithuba ukuxoxa nawe eDubai noma iyiphi indawo esifundeni se-Gulf.
Abayi ndawo nganoma yisiphi isikhathi esigabeni senethiwekhi kwiwebhusayithi yabo. Kepha yini ongayenza ukuthola umsebenzi kukhona ukuxhumana nabo mathupha. Bathumele imininingwane esheshayo engxenyeni yokuxhumana. Futhi le yindlela ongathola ngayo umsebenzi ngokubathumelela imininingwane ngqo efemini. Futhi eDubai lokho empeleni kwesinye isikhathi kuyakufanelekela ithuba lokunikeza. Iningi lezinkampani ezinkulu zibuyela kubantu bazo abathumela ngokuqondile kusigaba sokuxhumana.
Ihhovisi lokuxhumana le-Back Back
Inhlangano yesayizi yesibili ngokusho kwe-Google. Futhi le nkampani ihlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kakhulu nezinsizakalo ezeluliwe kakhulu kumakhasimende ayo eDubai. Kodwa-ke, le nkampani ayihambeli esigabeni sokuqashwa kuwebhusayithi yabo. Kepha njengoba kusetshenziswe kuwe ungabathumela imininingwane esheshayo mayelana nokuqhubeka kwakho nolwazi lwakho.
Ngakho-ke uzoba nokuhle ithuba lokuthola umsebenzi nabo futhi nethuba lakho lokukhuluma nomnyango wezabasebenzi ngomkhiqizo omkhulu njengale nkampani.
Imisebenzi yesikhungo sezingcingo eDubai ziyindlela enhle yokwenza imali!
Futhi yidla wena wake wahlangabezana ngaphambili ne-telophase noma nezinsizakalo zokubiza ezibandayo. Nakanjani bekufanele kukunikeze ukushayelwa ucingo futhi ngale ndlela kuzokusiza ekutholeni imisebenzi yesikhungo sezingcingo eDubai.
Ukuhlinzekwa Kwezinkonzo Zedolobha
Inkampani Yezingcingo Yezokuphepha Izikhungo uxhaswe e-United Arab Emirates futhi iqala ukusebenza ku-2006 njengenkampani ehamba phambili. Le nkampani ingenye yezindlela ezinkulu kakhulu zokwakhiwa kwamakhaza okubiza amakhaza eDubai.
Kodwa-ke le nkampani ikwazile ukuthola isigaba sayo somsebenzi umphambili wewebhusayithi ekhoneni eliphezulu kulabo abafuna umsebenzi. Ngokuvamile ukukhuluma le nkampani kuncike endaweni ephithizelayo eDubai. Banokubuyekezwa okungaphezulu kwe-20 okungaphezulu kokulingene. Isibonelo, ukubuyekezwa kwezinkanyezi ezine futhi ungazishayela ukuthumela i-CV yakho. Futhi nganoma yisiphi isikhathi, ungaxhumana nabo kumuntu uthole umsebenzi nabo.
Izinkampani Eziqondile Eziqondile Zedatha
Le nkampani isinda ngaphezu kwabasebenzi be500 iziteshi eziningi zomsebenzi mayelana namakhulu abo futhi ungathola umsebenzi kanye nabo. Ngaphezu kwalokho, le nhlangano isebenza ngaphezulu kweminyaka emine amazwe aseMiddle East asesha iDubai Saudi Arabia neQatar. Futhi ingabe le nkampani ibizonyusa ama-eseyi kunoma iyiphi indawo emhlabeni.
Ngakho-ke nakanjani ubheke izibuyekezo eziku-inthanethi nangaphezulu kwalokho umphathi ithi ukubheka izinsiza zabo. Uye wazama ukuxhumana nabo umnyango wezabasebenzi ngokuqalisa kwakho okuvuselelwe. Futhi uzothola izipesheli zemisebenzi ezikhangayo. Noma okungenani uzokwazi zazise enkampanini eqasha eDubai.
Isikhungo sokuxhumana se-DOZ e-Emirates
I-Emirates ingenye inkampani enhle yokusebenza esifundeni se-Gulf. Banemisebenzi yesikhungo sezingcingo eDubai the I-United Arab Emirates. Kumele nakanjani ubheke iwebhusayithi yabo.
Le nkampani izoba ekugcineni kohlu lwethu ngoba ukuthola umsebenzi nabo ukuze bazinike isikhathi. Inkampani ye-Emirates iqasha abathengi ngezikhathi ezithile kepha ezimweni eziningi, udinga ukuba ne-visa esandleni sakho ukusebenza nabo.
Yingakho Inkampani yedolobha laseDubai enikeza inkampani i-Emirates kumakhasimende ethu e-UAE. Le nkampani ngokuqinisekile izokuvumela ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nalesi sikhungo semisebenzi eDubai i-United Arab Emirates.
Isikhungo Soxhumana nabo se-Raya
Careers I-imeyili: cv@rayacc.com
Inkampani enamagatsha angaphezu kwe-3 emhlabeni wonke. Banamahhovisi eWarsaw - Poland, I-Dubai, i-UAE neCairo, eGibhithe.
Le nkampani enye yezinkampani ezinkulu eMakethe Ephakathi Ephakathi. Futhi usebenze kuphela izinga eliphakeme kakhulu. Kufanele ubheke iwebhusayithi yabo futhi usebenze nge-CV yakho ebuyekeziwe noma ubanikeze iphuzu lokubuka mayelana nesipiliyoni sakho bese ulinda ukuthi kwenzeke umlingo.
Njengoba sishilo ukuthi kufanelekile kwesinye isikhathi ukuvele ungene bese uphonsa kulwazi lwakho lwe-TV enkampanini engaba khona ngenxa yezinkampani eziningi esizibeka ngaphezu kwekhulu labantu emikhakheni yabo. Ngakho-ke kufanele nakanjani uhambise uhlelo lwakho lokusebenza lwembongolo bese uzama ukuthola imininingwane eminingi, ngokwesibonelo, ukuthengisa i-cryptocurrency.
Ikhamphani ye-Ingres Call Center
Akuyona inhlangano ethandwa kangaka kwezokuxhumana ayithandwa ngisho nakubasebenzi abasebenza kakhulu kwaGoogle. Le nkampani iyinhlangano ekhulayo inhlangano futhi nakanjani, uzozithola ungumuntu obaluleke kakhulu kule nkampani uma onolwazi emnyangweni wezentengiso.
Sicela uxhumane nale nkampani ngokungaqondile bese uzama ukuthola amehlo enyama kwi-CV yakho. Nakanjani, kufanele uziphathe ngokwengeziwe emniningwaneni ophathelene nabaphathi kule nkampani ungabathola bekhipha i-in in noma ku-Facebook bayikhiphe ku-Facebook noma ku-Facebook. Zama ukushisa ngqo kukhona umnyango wezabasebenzi futhi unikeze izinsizakalo zakho kubo bangakwazi ukukusiza ekutholeni umsebenzi omusha e-Abu Dhabi noma eDubai.
Ziwo vele ubanike ucingo
Inkampani yeZiwo isebenza emazweni amaningana Europe, I-Middle East ne-Asia. Ngokuqinisekile, enye yezinkampani eziphezulu zeFrance ne-UAE ukusebenza njengomphathi omkhulu. Lapho ungaqala khona eukuphumelela futhi ube ngumuntu ophumelelayo endaweni yokuthengisa nokubanda yokubeka indawo ebandayo.
Ngokuqinisekile kufanele ucabangele le nhlangano njenge enye yezinkampani eziphezulu ezilinganiselwe ukuthola abasebenzi bazo. Le nkampani iqasha izinkulungwane zabasebenzi emhlabeni wonke kanti okwamanje bayayifuna kanye nokuthengisa umuntu ophethe.
Ngakho-ke kufanele ucabangele uhlelo lwakho lokusebenza ukuthi liqhubeke futhi nefomu lakho lesicelo sokuvuselela olusha vele ubanikeze ucingo ngoba empeleni baqasha eDubai.
Le nhlangano isohlwini lwethu lwe enye yezinkampani ezinhle kakhulu ongasebenza nazo. Empeleni baqasha abasebenzi abangenawo amava kanye nabaphathi nabaphathi abaphezulu. Ngakho uwena ophethe ungathola lowo msebenzi omuhle kakhulu wenkampani lapho ungakhulisa khona Umsebenzi wakho Wokuthuthuka kufinyelela ezingeni leHyatt International.
Futhi njengomfundi, ungabanikeza futhi ucingo ngoba empeleni lukhona ngifuna abafundi nabantu abangenaso isipiliyoni. Bazokuqeqesha futhi bakusize ube ngumuntu omuhle ngenkathi uzobe ushayela amakhasimende abawabiza ngokubabiza futhi kunjalo uzothola ithuba lokukhulisa inani lakho lesikhathi esizayo ngaphakathi kwenkampani.
I-Concentrix Global Company
Amathuba angenamkhawulo Le nkampani yamazwe aphesheya inhlangano yamathuba okuphatha. Ngakho-ke uma uneminyaka emihle yesipiliyoni ngemuva komhlane wakho. Nakanjani uzothola okuthile kule nkampani. Empeleni abaqashi e-United Arab Emirates njengamanje. Kodwa-ke, zifana nenhlangano yamazwe omhlaba. Ngakho-ke kuzokufanele lokho ngokuya kwamazwe aphesheya ukuthuthukiswa kwemisebenzi.
Ukube besingaba nenkampani ukukhetha ngokuqinisekile le nhlangano kuzoba ngenye yokunyakaza okuhle kunazo zonke empilweni yakho. Ngakho-ke bheka lapha kuwebhusayithi. Faka isicelo nge-CV yakho entsha.
Kodwa-ke, uma ukuvuselelwa kwakho kubuyekeziwe futhi kungekho ezingeni lokuphatha kubathumele ukuze baphinde baqale kabusha. Joyina inhlangano ehlukahlukene yomhlaba wonke, ephezulu.
Ngoba le nkampani ikufanele ukuhamba futhi bayikho imisebenzi ekhanda inikezela ukubheka eDubai. IConcentrix nayo iyaqasha eYurophu Asia nase-United States.
Inkampani Yenkampani Yezingcingo
Inkampani enhle kakhulu ukusebenza ngaphakathi kwe-Arab Emirates. Ngokuvamile, uma ufuna ukusebenzela inkampani eseDubai. Le nhlangano ibukeka njengombono ohlakaniphe kakhulu wokuthola okunikezwayo kwemisebenzi. Kuluhlu lwethu okuyizinkampani ezahlukahlukene eziyikhulu. Kepha le nkampani ngamaphesenti ayikhulu asekelwe eDubai futhi kungaba lula kakhulu ukuthi ungene ehhovisi uthinte umphathi wezabasebenzi abavela eNdiya ehhovisi labo laseDubai.
Uzoba nomsebenzi eDubai noma ku-Abu Dhabi. Baqasha ngisho nesipiliyoni esiyisisekelo noma ungathola ithuba lokugada ngaphezulu noma amathuba okuphathwa kwabasebenzi abaphezulu. Sanquma ukubeka le nkampani njengenkampani enhle yokusebenza endaweni yezingcingo.
Inkampani yedolobha lase Dubai hlaziya njalo. Singasho nakanjani ukuthi le nkampani nayo indawo enhle eDubai noma e-Abu Dhabi uma bezothola ithuba lokukubeka elinye lamadolobha amakhulu kakhulu lahlanganisa i-Arab Emirates.
Sinethemba lokubona i-CV yakho. Futhi ngokuqinisekile ungathola okuthile unentshisekelo ezinhlanganweni ezinjengeDubai.
Enye yezinkampani ezinkulu e-United Arab Emirates. Le nkampani ophethe ihhovisi hhayi eDubai noma e-Abu Dhabi kuphela. Bakhula futhi bahola amahhovisi eNdiya kanye nehhovisi le-telecom ezindaweni eziningi eDubai.
Uma ubheka ukuzilawula indlela engcono yokuthola umsebenzi. Le nkampani nakanjani izokusiza ukufeza impumelelo empilweni yakho. Ngoba nje banokubuyekezwa cishe kwe-5 Stars -Google imephu. Futhi lokho kuyabanikeza ithuba elihle kanye nendlela esebenzayo kakhulu zamakhasimende nabasebenzi.
Ngakho njengomuntu ofuna umsebenzi kufanele nakanjani uzame ukuthola umsebenzi nale nkampani. Noma okungenani uthumela i-CV yakho ebuyekeziwe kwiwebhusayithi yabo. Futhi vele ulinde kuze kube yileso isikhathi ukuthola imisebenzi enikezwayo.
Isikhungo Socingo se-Ejadah
I-Emirate emsulwa ibhizinisi inkampani. Le nhlangano isebenza ngamaningi imisebenzi yomphakathi ezifundeni ezinkulu e-United Arab Emirates. Ngaphezu kwalokho, ukuphatha ngaphezulu kwe-116m sqft yentuthuko e-UAE. Le nkampani ibisebenza yinhlangano nomphakathi omningi ukusebenza ezifundeni ezinkulu.
Inhlangano inamahhovisi amabili. Okokuqala Ihhovisi liseDubai kanti elesibili likhona e-Abu Dhabi. Indlela smart okuzoba ngayo ukungena futhi ubanikeze ukuqhubeka kwakho okuvuselelwe. Futhi ngenhlanhla, uzoba nemisebenzi ethokozisayo enikeziwe noma okungenani uzoba nolwazi olujulile mayelana nezikhala zabo.
Omunye umqondo oqondile ngukuthi ubanikeze ucingo. Njengoba banjalo ezinze e-United Arab Emirates ithuba elihle lokukhuluma nabaphathi abamele inkampani. Futhi ukukholisa umuntu ozokunikeza umsebenzi noma izokunika i50% ithuba lokuthola okunikezwa umsebenzi okusha okuvela ezinkampanini ezinjengaleyo.
Ubuchwepheshe Bebhizinisi Ehlakaniphile
Le nkampani ilwe kanzima ekuqaleni. Futhi manje bayinkampani enhle. Ilondolozwa izinkulungwane zamakhasimende masonto onke. Ukunikeza izixazululo zokuvikela idatha kanye nezinsizakalo zokuthuthukisa ubuchwepheshe bamanye amazwe.
Inkampani kufanelekile i-100% ukufaka isicelo semininingwane yakho yomsebenzi. Kufanele ubheke iwebhusayithi yabo. Futhi ubheke Ingxenye yabo yokuxhumana bese ubathumela i-CV yakho noma ushayele i-asap futhi khuluma ngocingo.
Mane nje usheshe ukufaka isicelo kule nkampani ngoba ukubheka ukusebenza komnyango wesikhungo sokushayela ucingo kuthatha isikhathi. Udinga ukuba nolimi oluhle kakhulu futhi udinga ukwazi ukuthi ungazithengisa kanjani kanye nomkhiqizo wakho kumakhasimende angaba khona.
Ngakho-ke, gcina engqondweni nenhlangano ekuleli zinga efana nale nkampani yaphesheya. Uzothola inani elihle kakhulu futhi uzothola okuningi eDubai. Futhi le nkampani enamasiko ama-Arabhu nakanjani. Yimuphi umqondo ohlakaniphe kakhulu ukuqala ukusebenza nabantu abangama-Arabhu. Uzothola umbono ngesiko eMpumalanga Ephakathi
Isikhungo Socingo se-RTA
Inkampani ye-RTA eDubai inesikhungo sakho sezingcingo. Le nkampani iqasha abaphathi nabaphathi bezikhungo zezingcingo njengabasebenzi abasha emnyangweni wokuqeqesha.
Isiphathimandla Sezokuhamba Emgwaqweni in IDubai inabasebenzi abaningi. Ngakho-ke, ukuthola umsebenzi esikhungweni sezingcingo ingahle ilungele abaxoshwa. Isibonelo, abafuna umsebenzi ku-UAE bangabhalisa kwi-portal yabo futhi bakhethe inketho yomnyango wesevisi yamakhasimende.
Xhumana ne-CallOpia Isikhungo Socingo
Ukusikisela okuhle inkampani lapho ungathola khona umsebenzi wokuqashwa. Kufanele ubukeke kuwebhusayithi yabo nolwazi olwengeziwe.
Le nkampani isiza ezinye izinkampani ngemali futhi yathuthukisa ubudlelwano bensizakalo yamakhasimende. Empeleni bahlinzeka ngokusekelwa kwe-imeyili yefoni ngisho nokwesekelwa kwengxoxo yewebhu. Zikhona empeleni inkampani enhle kakhulu ephelele. Futhi kubukeka njengomsebenzi kuzogeleza ebhokisini lakho le-imeyili ngenkathi ubanikeza ucingo noma ubabuze ngemisebenzi etholakalayo kuwe.
Ungasabi ngewebhusayithi yabo. Kubukeka njengenkampani elula kakhulu kodwa empeleni, empeleni kunjalo ukusekelwa okubanzi nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Ngakho-ke ukusebenza kule nhlangano kubukeka sengathi kuhle kakhulu ukutshalwa kwezimali ngesikhathi sakho kanye nentuthuko yempilo yakho.
I-SOS yamazwe ngamazwe
Inkampani ye-SOS yamanye amazwe akuyona uhlobo lenhlangano ejwayelekile yezikhungo zokushayela. Kodwa-ke, banomnyango wabo wezikhungo zocingo. Futhi kufanele thumela ukuqhubeka kwakho Lapho bese ulindela ukuthi kwenzeke umlingo. Ngoba le nkampani empeleni ifihle umhlaba wonke futhi bayizinkulungwane ezisindayo yonke imisebenzi inikeza emhlabeni jikelele.
Ngakho-ke impela kufanelekile ukubanikeza ithuba futhi ubhalise i-CV yakho ebuyekeziwe kuwebhusayithi. Ngoba baqasha ngisho nase China Europe nasekuthuthukisweni kwamakhono emhlabeni jikelele emhlabeni jikelele. Le nkampani ihlobene kakhulu nesikhungo sezingcingo esimbozwe yi-Medical. Kepha uma unesipiliyoni esihle ekuthengiseni abantu ukuthi umkhiqizo wakho noma nezinsizakalo ezinkulu le nkampani izokusiza zuza ikusasa lakho hhayi kuphela eDubai.
Inkampani Yenkampani Yesevisi
Inhlangano enolwazi kakhulu ngokwebhizinisi. Ngakho uma ufuna inkampani enhle yokuhweba. Le nhlangano ibukeka njengenkampani enhle kakhulu. Ungeluleka abanye abafuna umsebenzi eDubai. Unganikeza okuhle ngale nkampani ngoba banikeza amathuba amaningi amahle esiFundeni saseMena.
Kodwa-ke, le nhlangano iyingxenye yeRobes enkulu yezinkampani empeleni eziqasha futhi zithole imisebenzi enentshisekelo ayinikezi e-United Arab Emirates kepha futhi esifundeni sonke saseMpumalanga Ephakathi.
I-Du-Mobile Inkampani e-Dubai
Le nkampani ingene indawo ethokozisayo lapho ungathola khona umsebenzi. Isibonelo, bahlela nezinhlelo zeselula namaphakheji we-TV, kanye nezinsizakalo zokusakaza kumakhasimende abo eDubai nase-Abu Dhabi. Ngakho-ke uma ufuna imali ekhokhelwa kuqala noma engakhokhelwa. Kufanele nakanjani ubheke izinsiza zazo nokusetshenziswa kwewebhusayithi yenkampani.
I-du mobile iyazi kahle umakhala ekhukhwini Inkampani e-Dubai nase-Abu Dhabi. Kodwa-ke, bakha futhi ingxenye yebhizinisi labo kwamanye amazwe ambalwa njenge-Qatar ne-Saudi Arabia.
Kuhle kakhulu inkampani lapho ungakhuluma khona ngaphezulu kwengxoxo. Inkampani esebenza Yebo nezinkampani eziphezulu ezilinganiselwe, isibonelo, Mc Donald, Ikea, Vodafone nezinye eziningi.
Dubai City Company eluleka ngokuqinile abathengisi kanye nabasebenzi bendawo ukufaka isicelo kule nhlangano. Le nkampani inezinsizakalo eziningi. Vele, kungenzeka ukuthi usebenze njenge-ejenti yesikhungo sezingcingo kanye nesikhulu sezinsizakalo zamakhasimende.
Isikhungo Socingo Seqembu le-EROS
Isikhungo sezingcingo sisebenza ne-Eros Group. Iqembu elihle laliqala ukusebenza e-1967 bese kuba yi-Eros Group yasungulwa endaweni yokuhwebelana yaseDeira eDubai. Ngaphezu kwalokho, kusukela kuleso sikhathi inkampani iye yathuthela kwelinye izinga. Yiba yinkampani enkulu lapho ungathola khona umsebenzi. Ngaphezu kwalokho, i-Eros Group ingumsabalalisi ogcwele futhi ongumthengisi we-Consumer Electronics e-UAE nase-GCC.
Le nhlangano emangalisayo yaseDubai iphathe ukusebenza ngaphakathi kwesibalo sezisebenzi ezimbalwa kuhlobo olulodwa. Le nkampani ibaluleke ngempela isikhathi sakho futhi eminyakeni edlule emakethe yaseDubai nase-Abu Dhabi bakhule ngokuningana. Inkampani ingeze imikhiqizo eminingi, imikhiqizo nezinsizakalo ezimangalisayo emigqeni yamabhizinisi abo. Ngaphezu kwalokho, iqembu le-Eros selizofika kumaphrojekthi alo wamanje e-UAE.
I-HSBC yayo ibe neSikhungo Sezingcingo
Inkampani edumile ye-HSBC nayo inhlangano enhle. Kodwa-ke, akuzona isikhungo socingo olujwayelekile, ibhizinisi lokubhaka kanye nezezimali.
Uhlelo lwe-HSBC Banking lungenye yezinhlangano zamabhange ezihamba phambili nokukalwa kwezimali emhlabeni. Inkampani iyakwazi ukuphatha amakhasimende angaphezu kwesigidi se-39 hhayi eDubai noma e-Abu Dhabi kuphela. Inkampani ye-HSBC Bank kanye nabathengisi basebenza ngamabhizinisi amane omhlaba esifundeni se-GCC. Isibonelo, izinsizakalo zebhange lomuntu siqu nezamabhizinisi. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kwengcebo kumakhasimende akhethekile eDubai.
I-HSBC igxile ekuthengisweni kwamabhange e-UAE. Le nkampani enkulu isebenzela i-Global Banking futhi Izimakethe ze-GCC. Kodwa-ke, abaphathi kufanelekile ukuthi bakhulume ngokomsebenzi we-Global Private Banking. Inethiwekhi ye-HSBC ihlanganisa amazwe nezindawo ze-66 eYurophu, e-Asia, eMiddle East nase-Afrika, eNyakatho Melika naseLatin America.
Ubani osebenza eminyangweni yamakholi?
Abasebenzi bamaNdiya kanye nesikhungo socingo
Yebo, iqembu elikhulu empeleni elingumnyango wezikhungo zokushayela i-indy AmaNdiya. Leli qembu labantu liyisizwe esikhulu e-United Arab Emirates. Ngakho-ke, ukukhuluma uma uvela eNdiya uye eDubai. Imisebenzi yoMnyango wezikhungo zezingcingo noma izinsizakalo zamakhasimende ziyindlela esheshayo yokuthola umsebenzi eDubai nase-Abu Dhabi.
IDubai yindawo emangalisayo yabantu emhlabeni jikelele. Futhi amaNdiya ukuthatha ithuba lokusebenza eDubai. Abenzi imali enkulu. Kodwa-ke, uma uthola umsebenzi ojwayelekile ofanele futhi uqala ukusiza abantu. Ngaphezu kwalokho, ukweluleka abantu futhi kushukumise abantu ngokuthola umkhiqizo abawudingayo.
Kufanele nakanjani uhambe phakathi kwamaNdiya eDubai. Mane nje ngoba bangabantu abathola ukwenza lolu hlobo lwe-jumps okunikezwayo. Futhi ngenkathi uzoba nesipiliyoni esithile. Ngokuqinisekile uqonda kancane okwengeziwe ngeDubai ne-Abu Dhabi imakethe yokubiza okubandayo. Futhi ngokuqinisekile yindawo enhle ukuze uthole imali.
Ungaqala futhi uqale isikhundla kanye nesikhundla somphathi e-United Arab Emirates.
I-Filipinos Expats and Call Center
Iqembu lesibili labasebenzi abaningi eminyangweni yezikhungo zezingcingo selikhona Filipino izisebenzi. Sengisho nje, ukuba nolimi oluhle kakhulu lwesiNgisi. Njengoba befunde amakhono amaningi esikoleni sabo kanye nesiNgisi sabo empeleni kuqondakala kahle kubaphathi bezikhulumi zesi-Arabhu. Ngakho-ke empeleni kunomphumela omuhle kakhulu walo msebenzi futhi benza imali ehle ngisho nezikhathi ezithile zingcono kunalokho Indian akwenzayo eDubai.
Ngakolunye uhlangothi, amaPhilippines, enemakethe enhle kakhulu yokuthengisa umkhiqizo wawo. Ngoba banayo abangane abaningi nokuxhumana e-United Arab Emirates. Ngakho-ke ngePhilippines kulula ukuthola iningi lamaqembu axhunyiwe njengesikhumulo sePhilippines eDubai.
Futhi-ke, ngalokho, expats zasePhilippines zizoba nezinketho ezingcono zokuthuthuka ngokuzayo. Futhi njengoba sithe ulimi lwesiNgisi lusezingeni eliphakeme kakhulu eliyinzuzo enkulu ku-Abu Dhabi. IsiPhilippines ama-expats nawo angasebenza eYurophu noma e-United States naseCanada. Bakwazi futhi ukuthengisa ngocingo kubantu abaningi nasePhilippines njengesizwe kunabantu abahle kakhulu futhi banokuxhumana okuningana nesibalo sabantu.
Izikhulumi zase-Arabhu e-Dubai
Elinye Izwe nalo eMiddle East izikhulumi zesi-Arabhu. Kukhona inkulungwane yabantu abahlala eGibhithe Syria kanye I-Saudi Arabia. Futhi iningi labo empeleni lingabafokazi. Futhi bayeza eya eDubai ngomsebenzi.
Ngakho-ke lesi esinye isizwe esithandwa kakhulu. Empeleni banokuhlangenwe nakho eMakethe Ephakathi Ephakathi. Isibonelo e-Qatar Kuwait kanye namazwe ambalwa ama-otter ama-Arabhu. Futhi empeleni basebenza eDubai nase-Abu Dhabi. Kepha izikhulumi zesi-Arabhu ezinolwazi olunzulu ngakho-ke empeleni zisebenza ku izinga lokuphatha noma okungenani izikhundla zezinga lokuqondisa.
Ngakho-ke thola ngokwakho futhi ufunde ulimi lwesi-Arabhu. Kungakusiza ukuba uthole amathuba okunikezwa umsebenzi. Futhi-ke, kuyokuvumela ukuba usebenze njengomphathi ensimini ehlukile isibonelo ibhange or umnyango wehhotela e Dubai noma e-Abu Dhabi.
Kungani kufanele uthole imisebenzi yesikhungo se-call center?
Yebo, imisebenzi yezinkampani eziphezulu kwizikhungo zokushayela izikhungo zifana nomqondo ohlakaniphile futhi uma unjalo ukucinga indawo efanelekile yesikhathi eside. Futhi zibandakanye imisebenzi yamakhasimende wamakhasimende njengokushayela amakhaza nokuqokwa kwensiza
Kunesizathu esilula sokuthi kungani kufanele uthole leyo misebenzi ukunikela. Isizathu sokuqala kungenxa yobuhle indlela yokuthuthuka empilweni yakho yobungcweti njengendoda yesayensi eyisisekelo bese ikhushulelwa esigabeni esilandelayo kuzoba umphathi noma ngemuva kweminyaka emithathu ungashaya ngisho namathuba wemisebenzi yezinga lokuphatha.
Isizathu sesibili sokuthi kungani kufanele ukhethe lo msebenzi njengendlela yakho eyinhloko yokwenza imali kuzoba kungenzeka ukushintsha umsebenzi wakho ngendlela ethule ngokushesha. Isibonelo, ungavele ulahle isipiliyoni sakho kwenye inkampani futhi ngaphandle kokuqeqeshwa, ungaqala endaweni leyo ndawo futhi ube yindlela esheshayo yokudla.
Isizathu sesithathu sokuthi siphakamisa ukuthi ube yi-apukuhlolwa okungekho emthethweni kuyimali. Iningi lama-servicemen liyisibonelo emakethe yamasheya lenza amaholo amahle ngokususelwa kulwazi lwalo ungaba ngisho nokubuka ama-movie ambalwa ku-TV.
Abathengi bamasheya abiza abafundisi abandayo?
Iningi labathengi bamasheya kanye nabantu abathengisa izinsizakalo kumaklayenti angakhona benza imali enhle kakhulu ngokusekelwe kokutshalwa kwezimali noma ngisho nephesenti yenzuzo kusuka kumkhiqizo ngamunye. Isigaba
Ngakho-ke kufanele nakanjani ucabange ngakho ukuthi kungani ungazami ngoba ezimweni ezimbi kakhulu kuzokuthatha kuze kube iminyaka emihlanu ukufinyelela ezingeni lePfizer ukuze ube ngumphathi. Ngakho ubungeke ulahlekelwe iminyaka emihlanu emzimbeni wonke uzoba namathuba amahle emisebenzi ngamathuba wesikhathi eside.
Lokhu yingakho inkampani yedolobha laseDubai Ukunikeza amaklayenti namuhla le ndatshana futhi ikuvumela ukuthi uthole imininingwane eminingi ngalolu hlobo lomsebenzi eDubai.
Isiphetho Imisebenzi Yesikhungo Sezocingo e Dubai
Ngakho-ke yebo ngithola umsebenzi endaweni yokubiza amakhaza kungumsebenzi owesabekayo. Noma kunjalo, ukusebenza izinkampani eziningana ezifana nensizakalo yamakhasimende nokuhlaziywa kohlelo lokupholisa ngokuqinisekile kuzokusiza ukuthi uthole umsebenzi ongcono ngokuzayo. Omunye umqondo omuhle ukujoyina izinkampani zama-ink ezifana namafilimu esikhungo sezingcingo ukukhuthaza ukukhuthaza ama-lobster. Izinkampani ezinjengezikhungo zezingcingo zithuthukisa abaqondisi bazo kanye nabaphathi ngokushesha okukhulu kunezinkampani ezijwayelekile ezisebenza eMakethe Ephakathi Ephakathi isibonelo eDubai Abu Dhabi noma eDoha.
Ngakho-ke ukukhuluma okuningi uma uhamba futhi ucabanga ngokuhamba ngendlela engcono kakhulu kuzoba ukuzitholela wena okungcono kakhulu okunikezwa umsebenzi esikhungweni sezingcingo eDubai. Ngemuva kwalokho ziqeqeshe nokuthi usisebenzisa kanjani iskripthi kumthengisi omuhle ngoba lolu hlobo lomsebenzi luyisevisi yasehlobo esikhundleni sokuthengisa umkhiqizo kumakhasimende angaba khona.
Futhi ngale ndlela, nakanjani futhi uphumelele kakhulu ukuqala umsebenzi emkhakheni webhange ozothatha iminyaka eyi-10 ukukhushulelwa ezingeni labaphathi.
Expats esekelwe Dubai Market
Ngakho-ke ekuphetheni ngokusekelwe eMakethe yaseDubai, kungaba ngumqondo ohlakaniphile ukuqala phansi kulo mkhakha futhi uthole isipiliyoni sakho ngoba empeleni lezi zinkampani ziyindlela enhle yokuzikhohlwa, ikakhulukazi eMiddle East.
Imisebenzi yesikhungo sezingcingo ibukeka sengathi umsebenzi onzima impela futhi onzima kepha empeleni bheka yonke imodeli yokuthi kungani, usebenza futhi uthengisa umkhiqizo wamakhasimende angaba khona.
Lokho kuzokusiza nakanjani ukufezekisa impumelelo yakho uqobo uzofunda kangcono kangcono mayelana nenqubo yenhlangano enkulu kakhulu futhi uzothola isixhumanisi sezinkampani ezine ozisho kumkhiqizo futhi zinezinkampani ezikhulayo ngakho-ke noma nini lapho ungangena ungene uzithinte wedwa unikeze nezinsizakalo zakho kubo.